» झरनाले वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टलाई सम्मान गर्ने
झरनाले वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टलाई सम्मान गर्ने
२६ माघ २०७६, आईतवार १८:४७
मकवानपुर । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा ‘बकैया साहित्य महोत्सव’ हुने भएको छ ।
झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको २७ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आगामी फागुन १६ र १७ गते महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय भएको झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दिपक गौतमले जानकारी दिए ।
महोत्सवअन्र्तगत छन्द कविता प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने बताईएको छ । साहित्यको उर्वरभूमी मानिने मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र छतिवनस्थित गौतमबुद्ध पर्यटन पार्कमा कार्यक्रम आयोजना गरिने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
शनिबार हेटौंडामा बसेको झरनाको कार्यसमिति बैठकले कार्यक्रमको विषयमा निर्णय गरेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी, वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा झरनाले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वबारे पनि शनिबारको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सम्मानित हुनेहरुमा साहित्यकार तथा पत्रकार डा. नवराज लम्सालसहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने सात जनालाई मकवानपुरमा सम्मान गरिने भएको छ ।
मकवानपुरको छतिवनमा २०५० सालमा स्थापित झरना साहित्यिक परिवारले आफ्नो २७ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रही समाजमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न लागेको झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दिपक गौतमले जानकारी दिए ।
परिवारले यस वर्ष पत्रकारतर्फ वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने साहित्यकार तथा पत्रकार डा. लम्साललाई होमनाथ–टीकामाया प्रतिभा सम्मान–२०७६ बाट सम्मान गर्न लागेको छ । १५ हजार ५ सय ५५ नगद राशिको यो सम्मान झरनाका सल्लाहकार तथा छतिवनका स्थायी बासिन्दा नुरप्रसाद गौतमले स्थापना गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, शिव–साबित्री अधिकारी मुक्तक सम्मान–२०७६ मुक्तककार उषा शेरचनलाई प्रदान गरिने भएको छ । ११ हजार १ सय ११ नगद राशीको यो सम्मान झरनाका संस्थापक अध्यक्ष रमेश मोहन अधिकारीले स्थापना गरेका हुन् ।
बाबुलाल–भोजमाया स्मृति साहित्य सम्मान–२०७६ व्यङ्ग्यकार रामचन्द्र आचार्य फुर्सतीलाई प्रदान गरिने भएको छ । विनोद सुवेदीले स्थापना गरेको यो पुरस्कारको राशि ११ हजार १ सय ११ रहेको छ ।
त्यस्तै, खडानन्द–मनमाया प्रतिभा सम्मान–२०७६ विनोद विक्रम के.सी.लाई प्रदान गरिने भएको छ । ५ हजार ५ सय ५५ राशीको उक्त सम्मान मामाघरका परिकल्पनाकार अर्पण पराजुली र दर्पण पराजुलीले स्थापना गरेका हुन् ।
त्यस्तै, शुशीला दङ्गाल स्मृति सिर्जनशील नारी सम्मान–२०७६ कवि विना थिङ तामाङलाई प्रदान गरिने भएको छ । यो सम्मान राजन दङ्गालले ५ हजार ५ सय ५५ नगद राशिसहित स्थापना गरेका हुन् ।
त्यस्तै, ५ हजार ५ सय ५५ नगद राशिसहित संस्थापक तुल्सी गिरीले स्थापना गरेको सञ्जीवनी बुटी साहित्य सेवा सम्मान–२०७६ साहित्यसेवी मुक्ति गोविन्द वैद्यलाई प्रदान गरिने भएकोे अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सल्लाहकारहरु जनार्दन खनाल, रमेशमोहन अधिकारी, नुरप्रसाद गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।